The Economist: Dowladda Soomaaliya Oo Imaaraadka Ka Hortaagan Inay Buuxiyaan Meelaha Bannaan – Goobjoog News
Sida lagu daabacay majaladda The Economist, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ay Imaaraadka carabta ka hortaagan tagay in ay buuxiyaan meelaha bannaan, isla markaana ay u daba-maraan goobo gudaha Soomaaliya ah oo aaney dowladda Soomaaliya gacan amni iyo mid dhaqaale siin karin.
Majaladda oo qoraal dheer ka diyaarisay sida Imaaraadka uu Malaayiin Dollar ugu bixinayo Somaliland ayaa waxaa ay ku doodeysaa in Muqdisho aaney awoodin hor istaagga damaca Abu Dhabi, sababtana ay tahay awood yarida heysata iyo inay ka badan la’dahay Al-shabaab oo meel walba weerarta.
Qoraalkan waxaa lagu sheegay in $450m ee ku baxeysa dekadda Berbera iyo dhismaha saldhigga militari ay daliil u yihiin sida lacagta gacanta ay isbadal uga sameyn karaan geeska Afrika.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay qaraar ku saabsan in shirkadda DP World dalka laga ceyriyo, qaraarkaas oo aanu weli saxiixin madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu saameyn ku yeesho xiriirka labada dal.
NISA oo Taliyeyaal Cusub u Magacawday Hiiraan Iyo B/weyne